Dabley Hubeysan oo Dil iyo Dhaawac u Geysatay Darawallo Ku Safreyey Jidka Hiiraan – Goobjoog News
Dabley Hubeysan oo Dil iyo Dhaawac u Geysatay Darawallo Ku Safreyey Jidka Hiiraan
in amaanka, Galmudug, Gobalada, Hirshabeelle, Wararka Dalka
Wararka aan ka helayno gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in habeennimadii xalay dil iyo dhaawac loo geystay darawallo ku safreysay inta u dhaxeysa Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud, kadib markii dablay ay waddada u gashay gawaaridan.
Gaawaaridan oo ku sii jeeday Galgaduud ayaa waxaa ay la weeraray xilli ay marayeen inta u dhaxeysa deegaannada Bacda iyo Beergadiid ee gobolka Hiiraan, gawaarida ayaana ahaa Homy ah iyo Kuwa qaada Qudaarta ee Dhaynaha ah.
Qof ku sugan gobolka oo Goobjoog News la hadlay waxaa uu sheegay in weerarka uu ku geeriyooday darawalkii waday Homyda oo ka shaqanayey Muqdisho iyo Gaalkacyo, darawalka waa Sakariye Cabdullahi Caseyr, oo kaas oo lagu Cadaado.
Sida lagu waramay weerarka waxaa uu dhaawac kasoo gaaray dawalkii waday gaariga siday Qudaarta, kaas oo kasoo anbobaxay magaalada Baledweyne kuna siijeeday gobolka Galgaduud ilaa Mudug.
Dhacdooyinkaan dilalka iyo dhaawaa ah ayaa waxaa ay ku lug leeyihiin aan qabiil iyo dil shalay ka dhacay deegaan degmada Matabaan u jira 120 Km oo lagu magacaabo Labi-bagaase oo lagu dilay ruux kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug Oo Mahadceliyay Ciyaartooyda iyo Macallimiinta Ee Soo Gaaray Fiinaalaha Tartanka Maamul Goboleedyda
Guddoomiye Xaashi oo La Kulmay Deni iyo Madoobe
Guddoomiye Faadum Cali “Dhammaan Ciyaartoyda Galmudug Wadanka Turkiga Ayaan Geyn doonaa”